Makore makumi matatu nemashanu eWindows. Kubva kuvavengi vasingadzoreki shamwari dzepedyo | Linux Vakapindwa muropa
In the chinyorwa chapfuura, isu tanga tatanga kuongorora makumi matatu nehafu makumi matatu iyo Microsoft inoshanda sisitimu yave nesu. Mahwindo akaisa nhanho yekomputa yemunhu kubva kutanga kwema90 kusvika pakuuya kwemafoni, musika uyo Microsoft, kunyangwe kuyedza kwayo, yaisatomboita tsoka.
1 Makore makumi matatu nemashanu eWindows. Kubva pakubudirira kusvika pakundikana
1.3 Windows 8 / 8,1
Makore makumi matatu nemashanu eWindows. Kubva pakubudirira kusvika pakundikana
Isu takasiya iyi nyaya nekuburitswa kweWindows XP, sisitimu yekushandisa yakaramba ichishanda kusvika nguva pfupi yadarika uye ichiri kushandiswa zvakanyanya kupfuura mutsivi wayo Windows Vista. Uye kana Microsoft, akanyanya kufarirwa mawebhusaiti uye vanogadzira maapp vanga vasina kuomarara uye vorega kuitsigira, ingangove ichinyanya kushandiswa.
Windows XP yaive nemidziyo yekuchengetedza asi yaive yakaremara nekutadza. Izvo zvakakuita iwe chipfuro chemakomputa, Kufanana neInternet Explorer browser, anoteedzana maSevhisi Mapake akaburitswa, asi vazhinji havana kana kunetseka kuzviisa.
Windows Vista yaive kukundikana kukuru kwemakore makumi matatu nemashanu eWindows
Chekutanga vhezheni yeanoshanda system kuti igovaniswe muDVD fomati.
Pamwe chinhu chakanakisa chakaitwa naMicrosoft kuLinux yakanga isiri Windows Subsystem yeLinux, asi kuburitsa iyi vhezheni muna Ndira 2007. Kubva pane graphical interface padivi, Vista yakagadzirisa kutarisa kweWindows nekushandisa kwakawanda kwezvinhu zviri pachena.
Kutsvaga kugadzirisa kuchengetedzeka, chinhu choga chayakaita kutsamwisa mushandisi. Yakamuputira nezvikumbiro zvinogara zvichibva ku "Mushandisi Akaundi Kudzora" kuti ape mvumo kana achida kumhanyisa chikumbiro.
Icho chinangwa chaive chakanaka, asi psychology yaive yakaipa. Vanhu vakadzvanya "Hongu" kune zvese pasina kuverenga Rimwe dambudziko raive rekuti makomputa mazhinji akange asina mukana wakakwana wekumhanyisa. Kusanganisira akati wandei waisanganisira iyo label "Vista Ready"
Windows Vista yaisanganisira Microsoft's DirectX 10 tekinoroji tekinoroji muVista, Windows Defender antispyware chirongwa, kuzivikanwa kwekutaura, uye shanduro nyowani dzeMedia Player neInternet Explorer.
Microsoft yakaisa mabhatiri uye muna Gumiguru 2009 yakaburitsa iyi vhezheni iyo yakagadzirisa zvese zvakaipa nezve Vista. Ini pachangu, yaive yangu yekutanga vhezheni vhezheni yeWindows kubvira, nekuda kwechibvumirano nemayunivhesiti akasiyana, vadzidzi vanogona kuitora voishandisa mahara.
7 yaive yakatsiga, ichikurumidza, uye nyore kushandisa pane yakatangira, uye yakanga isiri seinonetsa nezvikumbiro zvemvumo. Kuzivikanwa kwekunyora nemaoko uye otomatiki hwindo rekugadzirisa zvakawedzerwa.
Rutsva rukuru rweiyi vhezheni rwakapihwa neEuropean Union, iyo yakamanikidza kuiswa kwemubatsiri kusarudza bhurawuza mune dzese shanduro dzakapihwa munyika dzenhengo.
Windows 8 / 8,1
Pano Microsoft inotora tsika yekuparadzirwa kweLinux, miedzo yekuedzwa kweveruzhinji kuwana. Chero ani zvake aigona kudhawunirodha vhezheni dzekuvandudza dzeWindows 8, ovaedza, uye nekuzivisa mabugs.
Windows 8 yakaburitswa munaGumiguru 2012 kuunza shanduko huru yeiyo Windows interface umo bhatani uye yekutanga menyu yakanyangarika uye yakatsiviwa neyekutanga skrini ine mavara mabaras.
Windows 8 yaikurumidza kupfuura shanduro dzekare dzeWindows uye yaisanganisira kutsigirwa kwemidziyo mitsva ye USB 3.0. Iyo nyowani (yeWindows) nzira yekuisa zvirongwa yakaunzwa, iyo Universal Windows Zvikumbiro zvakadzingwa kubva kuchitoro chekushandisa uye ivo vaishanda chete mune yakazara skrini mode. Zvichakadaro, iwo mapurogiramu anogona kuiswa kubva kuchinyakare nzira uye chete inowana yechinyakare Windows desktop1
Sezvakaitika kuUbuntu 12.10, yakaburitswa panguva imwechete neiyo Unity desktop, vashandisi vazhinji havana kugashira shanduko. Vashandisi veDesktop vaishandisa kudzora Windows negonzo uye keyboard havana kugadzikana neiyo interface yavanofunga kuti yaive yakakodzera kune yekubata skrini.
PKuti upindure kunyunyuto dzevashandisi, muna Gumiguru 2013, Microsoft yakaburitsa Windows 8.1 m
Windows 8.1 yakaunza zvakare bhatani reKutanga, izvo zvakaita kuti skrini yekutanga itarike kubva pakuonekwa kwedesktop kwenyaya iyi. Izvo zvaive zvakare zvichikwanisika kusarudza kubhodhi zvakananga mune ino interface modhi
In the chinyorwa chekupedzisira Kubva pane ino ongororo yemakore makumi matatu nemashanu eWindows, tichaenda kuzvitsaurira isu Windows 35, vhezheni ine shanduko dzakakura kudaro zvekuti inokodzera posvo yega yega.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Makore makumi matatu nemashanu eWindows. Kubva kuvavengi vasingadzoreki shamwari dzepedyo